KIO – democracy for burma
#BURMA #MYANMAR : ကေအိုင်အိုနှင့် အစိုးရ အချက် ၅ ချက် ဆွေးနွေးသဘောတူ
On May 13, 2014 May 13, 2014 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
မြစ်ကြီးနား မဂျွယ်ခန်းမ မှာ ယနေ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့် KIO ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့ ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန် cr. jadeland
ကေအိုင်အိုနှင့် အစိုးရ အချက် ၅ ချက် ဆွေးနွေးသဘောတူ
မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲ (၂)ရက်ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ပထမ ရက်မှာပင် ပြီးဆုံး သွားပြီဖြစ်သည် ။
#Burma #Myanmar #Peace #Monitor #Dashboard #April #2014
On May 2, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Myanmar Peace Monitor Dashboard ,April 2014
BURMA MYANMAR : 21.03.2014 သစ္စာအမဲ့ဆုံးတပ်မတော်….
On March 24, 2014 March 24, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
MARCH 21.03.2014 သစ္စာအမဲ့ဆုံးတပ်မတော်…. cr.Kayin LAY
မနက်က အလုပ်သွားရင် ရထားပေါ်မှာ ဖေ့စ်ဘုတ်နယူးစ်ဖိဒ်တွေကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်ရင်း စင်္ကာပူကညီလေး ဗမာ့သားကောင်းရေးတဲ့ စစ်သားအကြောင်းဖတ်မိတယ်။ ကွန်မင့်တောင်ပေးထားလိုက်ပါသေးတယ်။တဆ က်တည်းမှာပဲ မြန်မာပြည်က စစ်သားလေးတွေအကြောင်းရေးချင်စိတ်ကပေါ်လာတယ်။ ညနေအလုပ်ပြန်ရင် ရေးချမယ်လို့ လဲ ဆုံဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။
မကြာခင် တော်လှန်ရေးနေ့ ကိုအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ တပ်မတော်နေ့ ဆိုတဲ့ရက်ကလည်းနီးနေပါပြီ။ တပ်မ တော်သားတွေအတွက် ဂုဏ်ယူပေးရမယ့် နေ့ ထူးနေ့ မြတ်တရက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်တပ်မတော်နေ့ က တော့ ကရင်လေး ဘွင်းဘွင်းပဲပြောရင် ဂုဏ်ယူဖို့ နေနေသာသာ ယောင်လို့ တောင် မကြည့်ပါဘူး။ တဘို့တည်းကြည့်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကြည့်ရတာ အကုသိုလ်များလို့ ပါ။
ဒီကနေ့ တပ်မတော်ဟာ တိုင်းပြည်အပေါ်သစ္စာမရှိပါဘူး။ပြည်သူအပေါ်လည်းသစ္စာမရှိပါဘူး။ သည့်ထက် ပိုဆိုးတာက တပ်မတော်သားအချင်းချင်းပေါ်လည်း သစ္စာမရှိ တာဝန်မကျေပါဘူး။ တိုင်းပြည်အပေါ်ဘာလို့သစ္စာမရှိလည်းဆိုတာကို ဥပမာတခုပေးရရင် တိုင်းပြည်ကပေးအပ်တဲ့ အာဏာကိုအလွှဲသုံးစားလုပ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလို့ မိမိတို့ မိသားစု ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကောင်းစာရေးကိုသာ လုပ်ကြခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ တိုင်းပြည်က အမွဲစာရင်ဝင်နေပေမယ့် တပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်တွေ အလွန်ချမ်းသားနေကြပါတယ်။ယနေ့ တပ်မတော်ကို လက်ရှိဗိုလ်ချုပ်တွေဖျက်ဆီးထားပါပြီ။ Continue reading “BURMA MYANMAR : 21.03.2014 သစ္စာအမဲ့ဆုံးတပ်မတော်….” →
BURMA MYANMAR : GOVERNMENT Army Seized KIO’s Se Zin County Administrative Office
On March 1, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
While Burmese government’s delegation led by Minister U Aung Min and Ethnic Armed Organizations’ National Ceasefire Coordination Tem (NCCT) are preparing their next round of peace talks, at least three KIA frontline posts andaCounty office have been seized by Burmese army since January 31. Continue reading “BURMA MYANMAR : GOVERNMENT Army Seized KIO’s Se Zin County Administrative Office” →